Fa maninona ny olona no manambady? 15 Antony tsara sy ratsy amin'ny fanambadiana! - Fifandraisana
Raha eo amin'ny fifandraisana salama sy milamina ianao izao, dia mety ho zavatra eritreretinao ny fanambadiana.
Angamba ny vadinao no niresaka an'io tamin'ny resaka, na nenitoany nanampy.
Fa mety manontany tena ianao hoe: “Fa maninona aho no manambady?”
Azo antoka fa tsy an'ny olon-drehetra ny fanambadiana…
Tsy ampy ve ny fiaraha-monina?
Ary, eny, mazava ho azy ny fanambadiana dia tsy voatery hahomby amin'ny fiaraha-miasa maharitra.
Raha ny marina dia mitombo ny isan'ny olona mandany ny fiainany nefa tsy manambady mihitsy.
Saingy tsy midika izany fa tsy misy antony tsara hanambadiana.
Satria misy… maro amin'izy ireo.
Ny sasany amin'izy ireo dia manan-danja kokoa noho ny hafa, ary nantsoinay ireo antony ‘voalohany’ ireo.
Ny sasany manolotra tombony sy tombony izay tsy tokony ho fototry ny fanambadiana, saingy mitranga izany noho izy. Ireo no nantsoinay hoe antony ‘faharoa.
Fa mba hanomezana fomba fijery voalanjalanja kokoa, dia jerentsika ihany koa ny sasany amin'ireo antony ratsy mety hieritreretan'ny olona ny hanambady.
Tena tsy manana toerana izy ireo amin'ny fanapaha-kevitra hamatotra ny fatotra.
Ary mba hazava fotsiny, ity lahatsoratra ity dia tsy natao ho fanafihana ireo olona misafidy ny tsy hanambady.
Natao ho dokam-barotra miorina amin'ny fanambadiana tsotra fotsiny izy io.
ahoana no hahalalana raha tsy ao aminao ny bandy
Antony telo voalohany hanambadiana
Ireo no antony tsara indrindra handehanana eny an-dalantsara.
Na dia efa mafy orina aza ny fifandraisanareo dia tena antony manosika azy ireo hisafidy ny hanambady.
1. Ny fanehoana an'ohatra ny fitiavana sy ny fahatokisana
Tsy misy isalasalana ny amin'izany, ny antony lehibe mahatonga ny olona hanambady dia satria izy io dia tandindon'ny firaisana izay miorina amin'ny fitiavana sy fahatokisana.
Lanonana iray, na ara-pinoana na tsy ara-pivavahana, dia mety misy fanambaràna toy izao:
'Omeko anao izay ananako rehetra, ary izay ananako rehetra dia omeko anao.'
Ity ianao, amin'ny filazanao amin'ny vadinao hoe: 'Io no toetrako, izay anao koa ankehitriny, ary matoky anao aho fa hikarakara tsara izany.'
Fanehoana fahatokisana lehibe inona no misy?
Ary rehefa miteny izy ireo ho setrin'izany dia miteny an-tsary ianao (fa mangina) miteny hoe: 'Mandray ny toetranao aho, izay ahy koa ankehitriny, ary hikarakara azy io foana aho.'
Inona no fanehoana fitiavana lehibe kokoa noho izany?
Na dia tsy matetika aza ianao no miteny hoe 'tiako ianao' amin'ny fifandraisanao ary na dia mbola tsy nilaza mivantana tamin'ny namanao aza ianao hoe matoky azy ireo ianao, ny fanambadiana dia manamafy ireo zavatra roa ireo.
2. Ny finoana sy ny soatoavina ara-pinoana
Raha manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainanao sy ny vadinao ny fivavahana dia takatrao fa mety maniry hanambady ianao.
Ity antony ity dia matetika no atao ambanin-javatra ho tsy dia zava-dehibe amin'ireo tsy mpivavaka, fa raha izany no inoanao ny fitiavana olona roa tokony ekena amin'ny fanambadiana, tena antony tsara tokoa io.
Ananao ny finoanao ary tsy misy olon-kafa afaka mampihena izany.
Tsy midika akory izany fa tsy afaka ny ho sambatra ianao satria mpiara-monina maharitra mandritra ny androm-piainana, satria raha mafy ny fototra dia mety ho azonao atao izany.
Fa raha ny zavatra inoanao sy ny soatoavinao ara-pinoana ka mahatsapa fa mety aminao ny fanambadiana, dia azo antoka fa izany no safidy mety.
3. fahatsapana ny farany
Mazava ho azy fa misaraka ny olona. Tsy ny fanambadiana anefa no tanjon'ny fanambadiana.
Rehefa manambady ny olona dia mino tanteraka fa maharitra ny fifamatorana eo amin'ny roa tonta.
Ary io fahatsapana ny farany io dia antony mendrika hisafidianana ny fanambadiana noho ny fiaraha-monina.
Zava-dehibe izany raha ao anatin'ny folo taona voalohany amin'ny fanambadiana no atao ny fanambadiana.
Azo antoka, raha tsy nanambady ianao, fa niaraka nandritra ny 25 taona, dia mety efa manana ny fahatsapana fa maharitra ny fifandraisana.
Saingy tao anatin'izay 10 taona voalohany izay, ary indrindra nomena fa maro ny fanambadiana mitranga alohan'ity fahatanterahan'ny fifandraisan'ny mpivady ity, mifototra amin'ny ara-tsaina sy ara-pihetseham-po ny fanamafisana ny finoanao ny toetran'ny fanolorantenanao olona iray.
Fanavahana tena lehibe no mila atao eto.
Ny fanambadiana dia tsy natao ho an'ny manasitrana ny tebiteby na ny tsy fahatokisan-tena amin'ny fifandraisana . Tokony hodinihina fotsiny izany raha mino marina ianao fa ny firaisana eo aminao dia matanjaka ary haharitra.
Raha tsy matoky tena ianao ao amin'ny fiarahanareo, dia tsy hampisy fahasamihafana amin'ny fahatsapanao ny fanambadiana.
Antony 6 faharoa hanambadiana
Mba hiasa ny fanambadiana dia zava-dehibe ny fiheverana ny voalohany na ny antony rehetra etsy ambony.
Misy antony hafa tsara hanambadiana koa anefa.
Ity manaraka ity dia mety tsy ny antony manosika lehibe ho an'ny olona maro, fa raha manana fifandraisana maharitra maharitra ianao ary mieritreritra ny hanambady dia mety handresy lahatra anao ny amin'ny toetra tsara izy ireo.
Mety manontany tena ianao hoe inona no tsy itovizany amin'ny fahatsapana ny farany voatanisa etsy ambony. Sady koa anie, manolo-tena amin'olona dia fomba iray ilazana fa mahita azy ireo amin'ny hoavinao ianao.
Fa ny fanoloran-tena dia antony tsara hanambadiana raha zavatra omenao izany, fa tsy hoe raha mino ianao fa manaporofo izany fa mandray fanoloran-tena ianao.
Ny fanapaha-kevitrao hanambady dia tokony hiorina amin'ny fahatsapanao ny fifandraisana.
Ny fanapahan-kevitry ny namanao dia tokony hiorina amin'ny fahatsapany ny fifandraisana.
Ny fanapahan-kevitrao dia tokony tsy mifototra amin'ny zavatra tsapany.
Tokony hatoky ianao fa mahatsapa fahatokisan-tena amin'ny fifandraisan'izy ireo izy ireo, saingy ny andraikitrao ihany no azonao andraisana andraikitra. Tsy afaka tompon'andraikitra amin'ny azy ireo ianao.
Miorina amin'ny tsy fandriampahalemana izany. Tsy tokony maimaika ianao hanolo-tena amin'ny olona tsy amin'ny antony hafa fa tsy ny manantena ny hanolo-tena anao ho setrin'izany.
Tokony hahatsapa ho azo antoka ianao amin'izany fahalalana izany alohan'ny hieritreretanao ny hamatotra ny fatotra.
Tsy zava-dratsy ny mahatsapa fa ny fanambadiana no safidy mety indrindra amin'ny fiaraha-monina maharitra raha io no hitanao fa 'mety' zavatra atao mifototra amin'ny fomban-drazana.
Ity dia mety ho antony lehibe kokoa ho an'ny olona izay manana tantaram-panambadiana maharitra ny fianakaviany.
Raha efa am-polony taona maro no nanambadiana ny ray aman-dreninao, lava kokoa ny raibe sy renibenao, ary misy mpiray tam-po aminao manambady, dia mety hahatsapa ho safidy mety fotsiny izany.
Mazava ho azy, mbola mila ny fototry ny fitiavana sy ny fifampitokisana ianao, ankoatry ny zavatra hafa, fa raha ny fomban-drazana ho anao dia midika fanambadiana ary mahita fampiononana ianao amin'io fomban-drazana io, dia ataovy ho anisan'ny fanapahan-kevitra raisinao ny hilentika.
3. Mametraka fototra ho an'ny fianakaviana
Tsy miankina amin'ny ray aman-dreny manambady velively ny fiainam-pianakaviana sambatra sy milamina.
Fa afaka manampy.
Tsarovy ireo hevitra momba ny farany sy ny fanoloran-tena avy any ambony. Ianao sy ny olon-tianao no nanao ny fampisehoana farany ny fiaraha-miasa, mety hiteraka fahatokisan-tena amin'ny fanapahan-kevitra hanan-janaka izany.
Ary, ho an'ny sasany, ny fahatsapana fa 'marina' ny mitondra zaza ao amin'ny tokantrano manambady dia zava-dehibe.
4. Fiarovana raha maty
Miankina amin'ny toerana onenanao sy ny lalàna onenanao, ny vady tsy manambady dia mety efa manana ny zon'ny fananana sy ny tombotsoan'ny olon-tiany efa nodimandry.
Fa raha tsy azo antoka izany dia afaka manome fiarovana ny fanambadiana raha sanatria ka misy ny ratsy indrindra.
Ny zavatra farany tadiavinao ao anatin'ny fotoan'ny alahelo dia ny ady ara-dalàna momba izay mahazo.
nahoana no tsy misy olona mihaino ahy
Azo antoka fa zavatra eritreretina izany.
5. Fiantohana ara-pahasalamana
Any amin'ny firenena toa an'i Etazonia izay tsy misy fitsaboana ara-pahasalamana manerantany, ny fanambadiana dia afaka manome alalana ny mpivady iray hiantehitra amin'ny vadin'ny vadiny.
Na dia mety tsy antony lehibe aza izany ho an'ny sasany, dia mety hanana anjara toerana lehibe amin'ny fanapahan-kevitra ny hisafidianan'ny mpivady sasany ny fanambadiana noho ny fiaraha-monina.
Zahao fotsiny ilay politika mba hahazoana antoka fa manarona anao mivady izy roa. Tsy tokony horaisina izany.
6. Zon'ny mpitsidika sy ny fanampiana ny ankizy
Tsy izany no antony tsara indrindra hanambadiana satria mety hiteraka fisarahana na fisaraham-panambadiana izany.
Saingy, mba hisian'ny fandriam-pahalemana sy filaminana, dia mety ho antony kely mahatonga ny olona sasany hanambady izany.
Rehefa dinihina tokoa, tsy tianao ny tavela hikarakara ny zaza, tsy afaka miasa, nefa tsy manan-jo hanana ny haavon'ny zaza avy amin'ny ray aman-dreny hafa ny zaza izay mety miasa.
Toy izany koa, ny fanambadiana dia mety hiantoka ny zon'ny ray aman-dreny hahita ny zanany matetika, na dia tsy mpikarakara voalohany aza izy ireo.
Miankina amin'ny toerana onenanao ireo zavatra ireo na mety misy ifandraisany na tsia.
Inona no dikan'ny hoe tsy mivadika amin'ny fifandraisana?
Antony 6 ratsy hanambadiana
Ankehitriny rehefa nijery ny antony tsara hanambadiana isika, andao hitodika any amin'ny sasany amin'ireo ratsy indrindra.
Raha manontany tena ianao raha ny fanambadiana no safidy mety aminao, dia aza avela hanodinkodina ny fanapahan-kevitrao ny iray amin'ireto.
1. Efa ela ianareo no niaraka
Izy irery ihany, ny fotoana dia antony mahatsiravina hametrahana peratra amin'ny rantsan-tananao.
Satria andao hatrehana izany, mety efa nandany taona maro tao anaty fiarahana tsy tanteraka ianao. Tena hanova an'izany ve ny fanambadiana? Helo tsia.
Indraindray dia mety ho toa ny nanoloranao fotoana be loatra izany hoe ny fandoavana ny vola amin'ny fiarahana izao dia midika hoe very ireo volana sy taona maro ireo.
Saingy lasa ireo taona ireo, na dia faly sy tsy faly toy inona aza izy ireo.
Tsy hampody azy ireo ianao.
Ahoana no ho fantatra raha misy vehivavy tena tia anao
Ka aza miroso amin'ny fanambadiana tsotra satria efa niaraka tamina olona iray ianao.
Ny fanambadiana sambatra dia tsy ateraky ny tahotra ny ho irery na hakamoana na hamafisana loha.
2. Manantena ny hanambady ny fiarahamonina na ny fianakavianao
Mahatsapa fanerena ve ianao amin'ny fidinana an-dalantsara?
Manontany foana ve ny mpianakavinao hoe rahoviana ianao no hanao fety?
Mahatsapa ve ny mason'ny fiarahamonina eo aminao ary mila manambady tsy ho ela ianao na hatao hoe tsy fahombiazana mandrakizay?
Fantatrao izay, aza raharahina io fako io.
Tsy maninona izay eritreretin'ny ray aman-dreninao na ny fianakavianao na ny mpiara-miasa na ny antokom-piangonana fa ianao irery ihany no afaka manapa-kevitra raha te hanambady ianao.
Ny andrasana ivelany fotsiny dia ianao - ivelany. Tsy avy aminao ireo. Ary tsy tokony hanao zavatra tsotra ianao satria antenaina aminao izany.
Ataovy izany satria tianao ny hanao azy.
3. Tsy Te-handiso fanantenana ny mpiara-miasa aminao ianao
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy afaka nilaza tsia ianao.
Na ilay olona natolotra anao, na toy ny olona nahatsapa fanerena hanolotra azy, dia tsy te hamela ny namanao fotsiny ianao.
Andao hieritreritra hoe tia azy ireo ianao ary mahita ny ho avy miaraka, tsy midika ho azy izany hoe tokony hanaiky ny fanambadiana ianao.
Angamba tsy ny fotoana mety.
Angamba te hiara-hiaina mandritra ny fotoana kelikely ianao.
Angamba tena tanora ianao ary mieritreritra fa samy ho tsara kokoa amin'ny fahamatorana kely aloha.
Saingy na eo aza ireo zavatra ireo dia tsy te-hanao risoriso fifandonana ianao na, ratsy kokoa aza, fisarahana.
Ka niaraka tamin'io fotsiny ianao.
Raha misy zavatra milaza aminao fa tsy tokony hanambady amin'izao fotoana marina izao dia henoy izany feo izany.
4. Heverinao fa hamaha ny olan'ny fifandraisanao izany
Misy olona mieritreritra an'izany any an-dohany fa ny fanambadiana dia hampandriana ny ankamaroan'ny olana atrehin'izy ireo amin'ny fifandraisan'izy ireo.
Tsy hanao izany.
Miala tsiny fa diso fanantenana, fa ny voadim-panambadiana dia tsy ody famosaviana izay mahatonga ny olona roa hifankatia mandrakizay bebe kokoa.
Tsy manao izany izy ireo ajanony ny ady hevitra na mamaha ny antony fototry ny adihevitra.
Mety hiala sasatra kely ianao mandritra ny fotoana kelikely aorian'ny hanambadianao, fa mety hanaratsy kokoa aza izany amin'ny fotoana maharitra.
Eny, ny fifandraisana rehetra dia manana ny heviny mifamatotra, fa ny fanambadiana tsy afaka taratasy amin'ny triatra ny fifandraisana izay manana triatra mandeha ao aminy rehetra.
5. Tian'ny fianakavianao ny namanao
Andao hieritreritra fa tianao ny namanao, saingy mbola manana fisalasalana ihany ianao. Tsy maninona ary tsy fahita izany. Tsy ampy foana ny fitiavana mitazona olona roa miaraka mandritra ny fotoana maharitra.
Fa ampidiro amin'ny fifangaroana ny hoe mandroso tsara amin'ny fianakavianao ny fianakavianao.
Mety halaim-panahy ny mahita izany ho famantarana fa tsy mitombina ny fisalasalanao.
Rehefa dinihina tokoa, iza no tsy te hifanaraka amin'ny fianakaviany ny olon-tiany?
Saingy tsy ampy ny antony hieritreretana ny fanambadiana akory.
Ny fanambadiana dia misy eo anelanelan'ny olona roa - ny olon-drehetra dia sisin-dàlana fotsiny (angamba ankoatry ny zaza).
Ianao, amin'ny maha-iray amin'ireo olona roa ireo, dia mila mahazo antoka fa ny fanambadiana no zavatra mety aminao sy amin'ny vadinao.
6. Fanonerana ara-bola raha misy fisarahana
Raha mieritreritra ny hanambady madio ianao satria manome anao fomba sasany ahazoana onitra ara-bola amin'ny vadinao raha misy fisaraham-panambadiana dia aza atao izany.
Azo antoka fa mety hiaro anao ny fanambadiana amin'izany toe-javatra izany, saingy ny fikasana mialoha ny fisaraham-panambadiana dia tsy antony lehibe hanambadiana.
Hafa kely noho ny zony na ny zon'ny zaza zaraina izany satria ny hiarovana ny zaza dia izy kosa hanarontsaronana anao fotsiny.
Ka… Maninona no Manambady?
Raha fintinina, ny fanambadiana dia tokony ho fitiavana sy fahatokisana no loha laharana. Raha tsy manana ireo zavatra ireo ny fifandraisanao dia aza manambady.
Fa raha manapa-kevitra hanapa-kevitra ny amin'ny fanambadiana sy ny fiaraha-mipetraka ianao dia mandehana fotsiny amin'ny tsirairay amin'ireo antony voalohany sy faharoa ao ambony ary manontania hoe maninona izy ireo dia manan-danja tokoa.
Raha maro amin'izy ireo no zava-dehibe, ny manambady dia mety ho safidy mety aminao.
Raha tsy dia manandanja loatra izy ireo dia azonao atao ny manohy mipetraka ao mandritra ny fotoana maharitra na mandra-pahatongan'ny fotoana izay lasa zava-dehibe ireo zavatra ireo.
ahoana no hahafantarako raha misy olona tiako
matthew perry sy courteney cox
hetsika mahafinaritra hatao rehefa mankaleo ianao
mandra-pahoviana no raiki-pitia
ny fomba hahazoana tsara kokoa amin'ny famaritana ny zavatra